अलेक्ज्याण्डर डुमास बुबा र छोरा। वर्षगाँठ केहि वाक्यांशहरु। | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | लेखकहरू, किताबहरु, नोभेला, कथाहरू
El 24 डी julio de 1802 जन्म अलेक्ज्याण्डर डुमास र २२ वर्ष पछि, जुलाई २ 27 पनि, जन्मेको तिम्रो छोरा धेरै ऐलेजैंड्रो। तिनीहरू सम्भवतः अलेक्जान्ड्रोहरू हुन् फ्रान्स को सबै भन्दा प्रसिद्ध र पक्कै पनि दुई सबै समय को सबै भन्दा लोकप्रिय लेखकहरूविशेष गरी बुबा
यस ग्रहका केही बासिन्दाहरू अझै छन् जो पढेको छैन तपाईको किताब तर पक्कै पनि यो असम्भव छ कि त्यहाँ त्यस्तो कोही छ जसलाई उसले देखेको छैन चलचित्र उनको उपन्यासमा आधारित। र यदि त्यहाँ कोही छन् जसले ती पुस्तकहरू त्यहाँ सुनेका छैनन् भने, यो कुनै श doubt्का बिना तिनीहरू यस संसारका होइनन्। प्रशस्त र कालातीत साहस वा उदात्त र दुखद प्रेमको कथाहरूको पर्यायवाची। डुमास तिनीहरू दुर्गम छन् र, कानून द्वारा, एक पुस्तक हरेक वर्ष पढ्न वा पुनः पढ्नु पर्छ। हामी संग रहौं उनका केही वाक्यांशहरू।
अलेक्ज्याण्डर डुमास बुबा
सबै एकका लागि, सबैको लागि एक।
मदमेन र नायकहरू, दुई प्रकारका मूरनहरू जो धेरै धेरै एकै देखिन्छन्।
हामीले गुमाएका प्रियजनहरू भूमिगत रूपमा आराम गर्दैनन्, तर हामी तिनीहरूलाई हाम्रो हृदयमा बोक्दछौं।
त्यहाँ दुईवटा हेराइहरू छन्: शरीरको हेराई कहिलेकाँही बिर्सिन सक्छ, तर आत्मा को सम्झना सधैं।
सामान्यतया, सल्लाह अनुसरण गर्न को लागी अरूको लागि सल्लाह माग्दैन; वा, यदि तिनीहरूको अनुसरण गरिएको छ भने, यो त्यस्तो व्यक्ति हो जसलाई उनीहरूले दिएकोमा दोष दिन सकिन्छ।
बदमाश पनि इमान्दार मानिससँग ठट्टामा हाँस्दैन, कपटीले विश्वासको मानिस झैं आँसु झार्दैन। सबै झुठो मास्क हो, र यो मास्क कति राम्रोसँग बनाइएको छ, एक व्यक्तिले सँधै ध्यान दिएर यसलाई अनुहारबाट भिन्न पार्न सक्छ।
मौन हुनु दुर्भाग्यको अन्तिम आनन्द हो; कसैलाई राख्नुहोस्, जो कोही पनि हुन सक्छ, आफ्नो शोक को ट्रेल मा; जिज्ञासुहरूले हाम्रो आँसुहरू भिजेका जस्तै झिंगाहरू एक घाइते हिरणबाट रगत निकाल्छन्।
त्यहाँ सधैं ओठहरू हुन्छन् जसले एक चीज भन्छन् जबकि मुटुले अर्को सोच्दछ।
मेरो राज्य संसार जत्तिकै ठूलो छ किनभने म इटालियन, न फ्रान्सेली, न भारतीय, न अमेरिकी, न स्पेनिश हो; म विश्वव्यापी हुँ
सबै खराबीको दुई उपचार हुन्छन्; समय र मौन।
नैतिक घाउहरूको खासियत छ कि तिनीहरू लुकेका छन्, तर तिनीहरू बन्द हुँदैनन्। जहिले पनि पीडादायी हुन्छ, स्पर्श गर्दा रगत बग्न सधैं तयार हुन्छन्, तिनीहरू जीवित छन् र हृदयमा खुला छन्।
जीवनको सबैभन्दा उत्सुक कुरा मृत्युको तमाशा हो।
दुर्भाग्यताको चरम जानेको मात्र उसले सर्वोच्च खुशी महसुस गर्न सक्दछ। यो मर्न चाहेको हुनु आवश्यक छ, जान्न को लागी जीवन कस्तो मीठो छ।
अलेक्ज्याण्डर डुमास छोरा
मुटु भनेको अन्तिम चीज हो जुन पृथ्वीबाट आउँदछ र अन्तिम कुरा याद गर्दछ जुन मुटुबाट बाहिर आउँदछ।
म दुर्बलहरूलाई इम्बासिल्समा प्राथमिकता दिन्छु किनकि ती कमसेकम सास फेर्ने ठाउँ छोड्छन्।
महिलाले जसलाई शिक्षाले राम्रोसँग सिकाएको छैन, भगवानले प्रायः दुई पथहरू खोलिदिनुहुन्छ जसले उसलाई पछाडि पुर्‍याउँछ, जुन पीडा र प्रेम हो।
कला को एकान्त, दु: ख वा जोश आवश्यक छ। यो चट्टानको फूल हो जसलाई कठोर हावा र रूख क्षेत्र चाहिन्छ।
यो पुरानो हुर्कन को लागी यो बेकम्मा हुनेछ यदि यो आफैलाई सुधार्नको लागि छैन भने।
पैसा एक मात्र शक्ति हो जुन कहिले पनि छलफल हुँदैन।
सजिलै बदल्न सकिने जुनसुकै चीजलाई पनि सजिलैसँग छोड्न सकिन्छ।
म तिमीलाई चाहिएको तरिकामा माया गर्न कत्ति धनी छु न त तिम्रो चाहाना जस्तो गरी तपाईंलाई माया गर्न सक्ने गरीव छ।
मुटुले कति सडकहरू लिन्छ र कति कारणहरूले यसलाई प्राप्त गर्न फेला पार्दछ!
उत्तरहरू उत्सुकतासाथ पर्खिने जवाफहरू सधै आउँदछ जब एक घरमा हुँदैन।
युवाहरू सँधै मायालु पक्षको पक्षमा निष्कपट स्नेहको त्याग गर्छन्।
मानिस कत्ति निराश र छिटो हुन्छ जब उसको एउटा दयनीय भावनालाई घाइते महसुस हुन्छ!
सन्धिहरू सधैं हस्ताक्षर भएको दिन कार्यान्वयन हुन सक्दैन।
के तपाईं उपाध्यक्षको वृद्ध उमेर भन्दा विशेष गरी महिलामा केहि खिन्न देख्न सक्नुहुन्छ?
तपाईसँग जहिले पनि बाल्यावस्था रहेको छ, जे भए पनि तपाई जे भए जस्तो छ।
प्यारी आवाजले मनाउनु कत्ति मीठो छ!
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » अलेक्ज्याण्डर डुमास बुबा र छोरा। वर्षगाँठ केहि वाक्यांशहरु।
तिनीहरू भन्छन कि पढ्ने काम केवल राम्रो पुस्तकहरूले मात्र सहन्छ। निस्सन्देह "द थ्री मस्केटियर्स" यसको एक उदाहरण हो। मँ हरेक बर्ष भन्न सक्दिन, तर हरेक तीन वा चार यो उनीहरूको कारनाममा लाग्न धेरै रमाईलो छ। शुभकामना।